Edouard Mendy oo waajibaadka qaranka u seegaya ilkihiisa dartood – Gool FM
(London) 22 Maarso 2021. Goolhayaha kooxda kubadda cagta Chelsea ee Edouard Mendy ayaa seegaya kulammada xulka qaranka Senegal ee soo aaddaan maadaama uu la balansan yahay dhaqtarka ilkaha (dentis).
Tababaraha Blues ee Thomas Tuchel ayaa xaqiijiyay in 29-jirka goolka qabta uu seegayo waajibaadka qarankiisa iyadoo senegal ay ciyaareyso labo kulan oo ka tirsan is reeb-reebka koobka Africa Cup of Nations, waxaana taas baddelkeed uu aadaayaa dhaqtarka ilkaha si ilkaha loogu hagaajiyo.
Mendy ayaa seegay ciyaartii ugu dambeysay Chelsea ee ay FA Cup-ka guusha kaga gaartay kooxda Sheffield United waxaana baddelkiisa shabaqa ilaalinayay Kepa Arrizabalaga.
Goolhayahan ayaa sidoo kale seegaya kulammada xulkiisa bishan uu la ciyaarayo xulalka Congo and Eswatini, inkastoo ay Senegal horraan xaqiijisatay booskeeda koobka qarammada qaaradda Afrika ee cameroon lagu qaban doono sanadka dambe.
“Mendy waa uu joogi doonaa maxaa yeelay waxa uu marayaa sanco ilkaha looga sameyn doono” ayuu yiri macallinka Jarmalka ah kaddib shirkii jaraa’id ee ciyaartii shalay.
Shabaq ilaaliyaha Chelsea ayaa gool isagoo aanan laga dhalin garoonka ka baxay 11 kulan tan iyo markii uu Tuchel la wareegay shaqada kooxda ka dhisan galbeedka London.
Andrea Pirlo oo shaqadiisa shaki weyn la galinayo iyo warbaahinta Taliyaaniga oo baahisay xilliga la ceyrin doono macallinka Juventus